Idu otu ndi ahia nke Digital - Ihe ịma aka na otu esi ezute ha | Martech Zone
Idu otu ndi ahia ahia ahia - ihe ịma aka na otu esi ezute ha
Wednesday, December 28, 2016 Wednesday, December 28, 2016 Rachel McPherson
Na teknụzụ na-agbanwe agbanwe taa, iduga ndị otu azụmaahịa dijitalụ dị irè nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Na-eche mkpa maka nkà na ụzụ nke ọma na nke dịgasị iche iche, nkà ziri ezi, usoro ahịa ahịa, na nsogbu ndị ọzọ. Ihe ịma aka na-abawanye ka azụmahịa ahụ na-eto. Otu i si edozi nchegbu ndị a na-ekpebi ma ị ga-eso otu ndị na-arụ ọrụ nke ọma nke nwere ike izute ebumnuche azụmaahịa gị n'ịntanetị.
Nsogbu Digital Marketing Team na Otu esi aga izute ha
Ejiri Ego Zuru Oke
Otu n'ime nsogbu ndị isi ahia na - enweta bụ ego etinyere maka ọrụ ha. Ọ na-esiwanye ike mgbe ndị isi dị otú ahụ enweghị ike igosipụta uru ma ọ bụ ROI dabara na ego eji azụ ahịa dijitalụ. Ọtụtụ mgbe, a na-amanye ndị na-ere ahịa ịrụ ọrụ na obere ego, mana achọrọ ha iji mezuo atụmanya azụmahịa ahụ.
Gịnị ka ị ga-eme? Malite site na ịgbakọ ROI gị. Ikwesiri inwe usoro nke nwere ike ịgbaso ọrụ ahia gị na nsonaazụ ahịa metụtara nke ọ bụla. Jiri ihe ndị a gosi otú ihe omume gị si rụọ n’otu oge. Nke a na - egosi na mbọ ị na - agba n’ahịa na - amị mkpụrụ maka azụmaahịa a. Gbaa mbọ hụ na ị nwere atụmatụ ịzụ ahịa ahịa dijitalụ na ị kwenyesiri ike na ọ nwere ike ịchụpụ ROI dị mma. Ihe ịga nke ọma na atụmatụ gị ga-adọtakwu ego na-enweghị nguzogide.
Chọpụta Teknụzụ Kwesịrị Ekwesị na Abgbasochi Anya na Mgbanwe
Teknụzụ na-agbanwe ngwa ngwa. Nye ọtụtụ ndị, mgbanwe ndị a na-akpaghasị. Ihe ọzọ bụ na ụfọdụ ndị isi azụmaahịa nwere ike iche na ha adịghị njikere idozi mgbanwe ndị a. Site na nyiwe ahia na omume kacha mma na nyiwe ndị a na ngwaọrụ njikwa; ndị a niile na-edebe ndị ahịa ahụ na mkpịsị ụkwụ ha ka ha na-agbasi mbọ ike ịdị mkpa.
E wezụga nke ahụ, ọ dịkwa mkpa ịnweta teknụzụ ziri ezi iji jikwaa ndị otu na ịgba ọsọ nke ọma. O di nwute, ndi isi ahia dijitalụ nwere ike isiri ya ike ichoputa ngwa oru ndi kwekọrọ na ahia ha. Imirikiti ngwaọrụ ndị dịnụ ezuteghị nyocha zuru ezu nke nwere ike inyere onye ndu dị otú ahụ aka ịchọpụta ma ọ bụrụ na usoro a bụ ihe azụmahịa ha chọrọ.
Iji nyere gị aka ịnagide nsogbu a, lee ụfọdụ atụmatụ dị mkpa nke arụmọrụ ọ bụla njikwa oru ngo ndị isi otu kwesịrị ịchọ:
Nchịkwa Ọrụ - Maka ndị isi otu na - ejikwa ọtụtụ ọrụ, ị ga - ahụ ya ka ọ dịkwuo mfe ịrụ ọrụ na njikwa njikwa nke nwere ike ịhazi ma nyochaa ọrụ dị iche iche nke ọrụ ọ bụla site na ụbọchị, ndị mmadụ, ma ọ bụ ya. Na ngwa dị otu a, ịgaghị achọ ngwaọrụ ma ọ bụ sọftụwia dị iche maka ọrụ ọ bụla. Okwesiri inwe ike ịkwado ịkekọrịta faịlụ, mmelite oru, na ozi ndị ọzọ gbasara oge ọ bụla.
Njikọ Aka Team - Otu ọ bụla dijitalụ dị irè kwesịrị ikwurịta okwu nke ọma iji rụkọọ ọrụ ọnụ. Mgbe ị na-atụle ngwa ọrụ njikwa, chọpụta ma ọ nwere atụmatụ ndị arụpụtara dịka nkata, ozi ozugbo, ozi ịntanetị, ọgbakọ mkparịta ụka vidiyo, na ndị ọzọ iji kwado nkwukọrịta oge niile na-arụ ọrụ iji mee ka ndị otu niile nọrọ n'otu ibe.
Oge Ndepụta - Na atụmatụ a, ị ga-ejide n'aka na ị nwere ike nyochaa mgbe niile ma ọ bụrụ na ndị otu gị na-etinye oge ha na ọrụ aga. Won't gaghị echegbu onwe gị maka ịhapụ oge ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka oge elekere anaghị arụ ọrụ.
Akwụkwọ ọnụahịa - Nke a na - arụkọ ọrụ yana ngwa ngwangwa iji hụ na akwụ ụgwọ maka nkwekọrịta maka oge onye otu ọ bụla tinyere n'ọrụ. Ọ na-abịa na nseta ihuenyo iji gosipụta ihe otu onye otu nọ na-arụ ọrụ maka oge awa ọ bụla. Gba ọsọ ọsọ rụọ ọrụ ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ ịmepụta akwụkwọ ọnụahịa n'okpuru nkeji, nwere ike ịbawanye ụba arụpụta ma belata oge ejiri rụọ ọrụ nchịkwa.
Chọta na iringgba Okike Kwesịrị Ekwesị
Urgba ume, iwe, ma jigide ndị ọrụ kwesiri ekwesi bụkwa nsogbu ọzọ ọtụtụ ndị isi azụmaahịa dijitalụ na-eche ihu taa. Maka otu oge, na teknụzụ na-agbanwe agbanwe, ọ na-eme ka ndị na-ere ahịa na-emepụta ihe ma jiri nkà na ụzụ mara nke ọma. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa anaghị aga ngwa ngwa iji nweta nka teknụzụ nke ga-etinye ha n'ọnọdụ iji mejupụta oghere na-eto eto.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na mmadụ ga-achọta usoro ọrụ aka achọrọ, okwu mmefu ego a kpọtụrụ aha na mbụ na-abụ mmachi ọzọ. Dika ochicho choro maka ndi ahia ahia, ha nwere ike icho elu. Azụmaahịa ọ bụla nwere obere ego ga-achọta ọrụ na ijigide ndị dị otu a dị oke ọnụ.
Ọ bụrụ na ị ga - edozi nsogbu a nke ọma, bido site na ịchọpụta ụdị onye ịchọrọ maka ndị otu ahia gị. Ọ bụrụ na ọ dị ha mkpa ilekọta SEO gị, mgbasa ozi mgbasa ozi ma ọ bụ ahịa ọdịnaya, gbaa mbọ hụ na ha nwere ikike ndị a niile.
Taa, ọ bụghị iwu na ị ga-etinye ụdị ndị ọrụ ahụ n ’ime ụlọ gị. Nwere ike iku onye ọkachamara ọkachamara; aga nke ga-ebelata ụgwọ ọrụ gị. Ozugbo ịchọpụta ihe ị na-atụ anya ka ọkachamara ahụ mee ma ọ bụ mezuo, dee nkọwa zuru ezu, nkọwa doro anya gbasara ọrụ na biputere na nnọkọ ebe a na-achọta ndị ahịa dijitalụ.
Iji maa atụ, inbound.org, LinkedIn, na CareerBuilder.com egosila na nyiwe dị mma iji nweta ọkaibe mara mma site na ebe ọ bụla n'ụwa. Can nwere ike ịjụ ọtụtụ ndị na-aga ime ajụjụ ma họrọ otu nke gosipụtara ikike iji mezuo ihe ịchọrọ nke nkọwa ọrụ gị.
Ndị otu ọzụzụ
N'ihi teknụzụ na-agbanwe agbanwe na azụmaahịa na-eto eto, ndị otu ọzụzụ ka ha na-eme mgbanwe banyere mgbanwe ndị a ga-ewetara ọtụtụ ndị isi azụmaahịa dijitalụ ihe ịma aka. O nwekwara ike ịbụ ọnụ na oge na ego. Ebe ọ bụ na ịchọrọ ka ndị otu gị rụọ ọrụ nke ọma, ndụmọdụ ndị a nwere ike inye aka belata ibu ahụ;
Nyochaa arụmọrụ onye ọ bụla so na ya. Onye nke ọ bụla nwere ụfọdụ ike ị ga-abanye mgbe ị na-ekenye ọrụ iji nweta ihe kacha mma na ha. N'oge nyocha ahụ, gosipụta ebe ha adịghị ike nwere ike ịchọ ịnye ọzụzụ ma hụ otu ị nwere ike isi hazie maka nke ahụ.
Choputa ebe ndi otu gi no na nka. Enwere usoro ọmụmụ ịntanetị nke ị nwere ike ịkwado maka ha ka ha nọgide na-amụkwu nkà ha? N'ezie, enwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa ihe ntanetị n'ịntanetị nwere ike iji n'efu.
Mee elu mee ala, ị ka ga-achọ atụmatụ ọzụzụ siri ike maka ndị otu ọhụụ. Ka ị na-ewebata ha na ọrụ ọhụrụ ha na azụmaahịa gị, ị ga-ewepụta ebumnuche ụfọdụ nke ọnọdụ ahụ ma kpọọ ha ka ha gosipụta ikike ha nwere ime nke a.
Site na ekwuru ihe a niile, anyị nwere ike ikwubi na ị na-eduga otu ndị ọrụ azụmaahịa dijitalụ na-ekpughere nnukwu nsogbu taa karịa mgbe ọ bụla. Ọdịnihu agaghị eweta usoro ọ bụla iji belata nrụgide a.
Anyị niile kwesịrị ịnwale oke anyị ma nye ike anyị niile ijikọ ọnụ na otu. Ọbụna ọrụ ndị na-adị mfe na anya mbụ, nwere ike ịdị mgbagwoju anya ngwa ngwa. Hazi ọrụ, ndị otu, ndị na-enye mpụga na ndị ahịa n’ụzọ na-enweghị ntụpọ bụ ezigbo nsogbu.
Mana ijikọ ndị mmadụ abụghị ebe okwu biri. Iji duga oru ngo na uzo zuru oke, ichoro uzo di nkpa maka ikesa echiche ohuru, mmekorita site na oru oru, akuko, na otutu ihe.
Ihe a niile na-eme ka anyị kwubie na ịmepụta nguzozi na ọrụ ahụ anaghị adị mfe maka ndị isi. Y’oburu n’inwe onye na erere ahia ahia, duru ndi otu ihe mmeputa ma obu ndi mmepe, ma obu na ichotara nbido na ndi enyi ole ma ole - ma oburu n’onaghi eji ihe oru ngo, i nwere ike buru nnukwu nsogbu.
Oge gi bara uru. Lekwasị anya n’ihe kacha mma ị na-eme na ihe ndị ị na-agaghị emeli na sọftụwia. Ka software na-eme ihe ọ nwere ike ma n'otu oge ahụ, mara na ọ dịghị ngwá ọrụ dị otú ahụ nke ga-arụ ọrụ niile maka gị. Ọtụtụ ngwaọrụ ka bụ naanị - ngwaọrụ. Dabere na ụzọ iji ha, ha nwere ike bụrụ uru asọmpi ma ọ bụ igbu oge. Ọ dị gị n’aka inweta ikike ime n’ime ha.
Debanye maka ụbọchị 30 n'efu na ActivCollab!
Tags: activcollabịgba ụgwọ ụlọ ọrụoge ụlọ ọrụịgba ụgwọmmekota softwaredigital marketingmmekorita ahia dijitalụigoigo talentakwụkwọ ọnụahịaỌzụzụ Azụmaahịanjikwa ọrụngwanrọ njikwa orusaassoftwarenjikwa ọrụotu mmekotanjikwa ogenyocha oge
Rachel na-arụ ọrụ ugbu a dị ka osote onyeisi oche nke nkwukọrịta na Ọrụ mkpokọ. Mgbe ọ gụsịrị akara ugo mmụta nna ya ukwu na Nkwukọrịta ọ gbasoro ọrụ na ụlọ ọrụ dijitalụ, ọkachasị n'ịzụ ahịa na mmekọrịta ọha na eze.
Etu esi eme ka ihu ahia di na Facebook
Ihe na - azụta ngwa ahịa akpaaka